Qatar Airways na-agba ọbịbịa nke ụgbọ elu ya na Skopje
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Qatar Airways na-agba ọbịbịa nke ụgbọ elu ya na Skopje
Qatar Airways mere emume mbata nke mbido ụgbọ elu ya na Alexander The Great Airport, Skopje na 17 July yana mkparịta ụka pịa na nri abalị na Marriott Hotel Skopje. Ihe omume ndị a kwadoro site na Qatar Airways Chief Commercial Officer, Mr. Ehab Amin, onye nabatara ndị ọbịa VIP gụnyere gụnyere Mịnịsta nke Transportgbọ njem na Nkwukọrịta nke Republic of Macedonia, Mr. Goran Sugareski; TAV Macedonia General Manager, Maazị Alp Er Tunga Ersoy; Onye nnọchi anya gọọmentị Macedonia na Qatar, Oriakụ Vukica Krtolica Popovska, na onye nnọchi anya mba Qatar na Republic of Macedonia, Maazị Hassan Bin Abdullah Zaid Al Mahmoud.
Ndị kpọrọ oriri abalị ahụ, gụnyere ndị VIP nke Macedonian na Qatari, ndị ọbịa a na-asọpụrụ site na ụlọ ọrụ njem na mgbasa ozi, ha niile nwere ọmarịcha usoro ntụrụndụ na isi okwu nke onye ama ama Macedonian bụ Jana Burceska.
Onye isi ahia nke Qatar Airways, Maazị Ehab Amin kwuru na nnọkọ ogbako ahụ: “Obi dị m ụtọ ịnọ ebe a taa iji mee emume maka mwepụta nke ụgbọ elu Qatar Airways gaa Skopje, ọnụ ụzọ ọhụrụ anyị na-abanye na Eastern Europe site na ebe anyị na-aga, Hamad International Airport na Doha. Qatar Airways nwere afọ ojuju iweta ahụmịhe ise nwere isi obodo Macedonia, nke jupụtara n'ọdịbendị na akụkọ ntolite. "
Onye isi njikwa nke ọdụ ụgbọ elu TAV Macedonia, Maazị Alp Er Tunga Ersoy kwuru, sị: “Doha, nke a maara dị ka Pearl nke Ọwara Arab, ga-abụ ohere njem na-akpali akpali maka ụmụ amaala Macedonia, ma oge ntụrụndụ ma azụmaahịa, mana ọ ga-abụkwa mee ka ndị Macedonia bi na Australia na New Zeland gaa leta ala nna ha. Anyị na-atụ anya na Republic of Macedonia, ya na ịma mma ya na ọdịnala ọdịnala, ga-abụ ebe na-atọ ụtọ maka ndị njem Qatar na ndị njem azụmahịa. Ọnụnọ nke Qatar Airways na Republic of Macedonia dị ka akara ga-eme ka ọdụ ụgbọ elu Skopje bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ dị ka ahịa, mepee ụzọ ọhụụ maka mmepe ya, ma na-atụnyekwa ụtụ na mmụba okporo ụzọ ọzọ.
Qatar Airways na-agbatịwanye mgbasawanye na Eastern Europe, yana ọrụ Prague, Czech Republic na Kyiv, Ukraine ga-amalite na njedebe nke August. Airgbọ elu mmeri ahụ gbalịsiri ike iweta ọtụtụ ndị ọbịa na Eastern Europe site na ịgbakwunye ọkwa ọzọ maka ndị njem na-aga ma ọ bụ site na Croatia, Hungary, Azerbaijan, na ebe ndị ọzọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe.
Na nzaghachi nke ọchịchọ na-arịwanye elu, ụgbọ elu na-aga Zagreb mụbara na ọrụ 10-izu kwa afọ gara aga, ebe Budapest na Baku abụọ rịrị elu na ọrụ 12 kwa izu na June 2017. A na-atụ anya na njem njem njem nke Ọwụwa Anyanwụ Europe ga-eto mgbe ụzọ ụgbọ elu ahụ malitere Serbia, Armenia, Poland, Romania na Bulgaria n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Zọ ọhụrụ a ga-aga Skopje ga-enye ndị bi na Republic of Macedonia ohere ijikọ ihe karịrị ebe 150 na netwọọdụ ụgbọ elu ụwa site na isi ya, Hamad International Airport, na Doha.
Qatar Airways ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu na Skopje na-enye mmeri Airbus A320, nke nwere oche 12 na Business Class na oche 120 na Class Economy. Ma ndị njem na klaasị azụmaahịa nwere ike ịnụ ụtọ usoro ihe nkiri kachasị elu nke ụgbọ elu ahụ, na-enye ihe ruru nhọrọ ntụrụndụ 3,000.
Tụkwasị na nke a, mmalite nke ọrụ ụgbọelu ụgbọelu na Skopje site na Qatar Airways Cargo ga-akwalite uto azụmahịa nke ikuku na Republic of Macedonia site na ijikọta mba ahụ na ndị isi na-ebubata ya na North East Asia site na ọdụ ụgbọ elu nke ụgbọ elu Doha. Launchedlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe na-ebu ụgbọ mmiri ọhụrụ na-eme ka ihe ngwọta dị jụụ na-enweghị atụ na-enye ọrụ zuru oke iji kwado mbupụ mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi ọhụrụ si Skopje gaa n'ọtụtụ ebe gafee netwọk ụwa ya.
Qatar Airways, onye na-ebu mba nke steeti Qatar, afọ a na-eme afọ 20 nke Goga Ebe yana ndị njem gafere azụmahịa azụmahịa 150 na ebe ezumike. Otu ụgbọ elu na-eto ngwa ngwa n'ụwa ga-aga n'ihu na-agbakwunye ọtụtụ ebe ọhụụ na-atọ ụtọ na netwọkụ na-eto eto na 2017 na 2018, ndị njem na-efe efe n'ụgbọ mmiri nke oge a nke ụgbọ elu 200.
ABA, ndị ọzọ na-eme njem na ndị njem na-agba ume ka ha chee echiche banyere usoro nchịkwa nke visa metụtara
Sixt-Rent-a-Car na-aga n'ihu na mgbasawanye US na ebe ọhụrụ